Misy rà rehefa avy miray, fa maninona?
Aferontany : ody mamy ho an’ny ankizikely !
Ho an’ireo ray aman-dreny fahiny, rehefa sendra manavy na mikohoka ny ankizikely, na koa diso nihinana zava-mamy loatra, dia aferotany no fanafody. Tantely, vatomaty “pecto” sns maro karazana ireo afangaro aminy, raha ny fanaon’ny olona.
Salade de pates à la sauce caramel
Akora ilaina · Paty 500g · Katsaka amin’ny boaty 150g · Voatabia 2 · Fraomazy 200g · Nofon-kenan-kisoa 500g · Tongolo be 2 · Menaka
Fivaviana sy andro mafana…tandremo ny aretina!
Mety hampiova ny fahasalaman’ny vatana ny hafanana ary isan’ireo mety hiantefan’izany ny fivaviana. Hoy ny dokotera.
Andro mamay be : Tandremo ny zazakely, zokiolona, bevohoka
Anatin’ny vanim-potoanan’ny fahavaratra isika amin’izao fotoana izao. Tafiditra miaraka amin’izay ny hafanana izay tena mamely.
Zava-maniry « ofika » : manasitrana vay !
Fanafody nentim-paharazana, tena fampiasa foana ny ofika rehefa misy vay ny olona iray. Eny amin’ireny mpivarotra tapa-kazo ireny no ahitana azy. Toy izao kosa ny fampiasana an’io akora io, raha misy vay.
Zaza tsy mitombo ao am-bohoka : Fa maninona?
Saro-pady be mihitsy ny fitondrana vohoka eo amin’ny vehivavy. Tranga mety hiseho amin’izany ohatra ny « Retard de Croissance Intra-utérine » izany hoe :
Manga : Efa azo hanina ve amin’izao?
Efa ambara amintsika ombieny ombieny ny mahakasika ny voankazo izay vokatra sy ny maha-latsak’orana azy na tsia. Vokatra izao ny manga, efa azo hanina tsara.
Mety tranga hiseho mandritra ny firaisana ara-nofo ny hoe : misy rà mandeha tampoka amin’ny fivaviana, kanefa tsy firaisana voalohany no sady tsy fotoanan’ny fadimbolana. Inona no mahatonga azy io ? Inona no tokony hatao ?
Aorian’ny firaisana, na elaela kely aorian’ny firaisana
Mety hiseho eo am-panaovana firaisana ara-nofo mihitsy aza, na ora vitsivitsy aorian’ny firaisana ara-nofo, ny rà mandeha, kanefa tsy fadimbolana akory. Antsoina hoe : « saignement post-coïtal” izy io. Mety ho zara raha betsaka, fa tete kely fotsiny ny rà mandeha, kanefa mety ho betsaka ihany koa. Mety hiaraka amin’ny fanaintainana izy io, rehefa miditra anaty fivaviana ny filahiana.
Aretina, dona mafy …
Maro ireo antony mahatonga an’io rà io :
· Dona mafy loatra amin’ny fivaviana.
· Tsy fahampian’ny hamandoana amin’ny fivaviana.
· Misy otrikaretina (Chlamydia), na koa misy zavatra maniry vokatr’io otrikaretina io any amin’ny lalan-jaza, na ny vozon’ny tranon-jaza, ka mandeha rà rehefa voakasoka, na voadona.
· Karazana fanafody fanabeazana aizana sasany.
· Misy karazana varisy ao amin’ny lalan-jaza, ka vaky izy ireo rehefa voadona.
· Misy fivontosana amin’ny vozon’ny tranon-jaza.
· Mihatery sy malemy ny lalan-jaza, indrindra rehefa tonga amin’ny fitsaharam-pitsaihana.
· Homamiadana na soritra homamiadana.
Tsy misy afa-tsy ny fanatonana mpitsabo ihany no hahafantarana ny nahatonga izany, indrindra raha mateti-mitranga io rà mandeha io. Mila manao “frottis” ihany koa, na mitily rà, sao misy otrikaretina azo avy amin’ny firaisana ara-nofo.
Isaorana ny dokotera Fidy Bariniaina
Clinigue et echographie Fidy Ambatomainty
033 14 209 91